Qarax Saraakiil Lagu Dhaawacay Oo Baardheera Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Qarax Saraakiil Lagu Dhaawacay Oo Baardheera Ka Dhacay.
August 26, 2016 6:15 am Views: 4
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qarax culus oo habeenkii xalay ka dhacay degmada Baardheera ee gobalka Gedo kaasi oo lala beegsaday gudoomiyaha dowlada Ridada federaalka ugu magacaaban degmada Baardheera iyo saraakiil la socotay.
Qaraxa oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha degmada Baardheera ee gobalka Gedo ayaa la xaqiijiyay inuu haleelay gaari ay la socdeen saraakiisha dowlada Ridada oo uu horkacayay gudoomiyaha degmadaasi ugu magacaaban.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Cadow oo ah gudoomiyaha dowlada Ridada ugu magacaaban degmada Baardheera iyo saraakiil dhanka amaanka ah ay dhaawacyo culus kasoo gaartay qaraxaasi.
Sidoo kale ilaalada gaarka ah ee Cadow iyo saraakiisha la socotay ayaa iyaguna dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi.
Warar hoose ayaa sheegaya in xilliga qaraxa gudoomiyaha iyo saraakiisha la socotay ay muuqaalo isaga duubayeen gudaha degmada oo ay doonayeen iney ku sheegtaan in magaalada habeen iyo maalin nabad tahay.